ထွန်းအိန္ဒြာဗို | Myanmar Mp3 Album
Home / Myanmar Artist / အဆိုတော် (မ) / ထွန်းအိန္ဒြာဗို
Category Archives: ထွန်းအိန္ဒြာဗို
မေသော် ရဲ့ နှလုံးသားသံစဉ်များ (2CD) (2013) [Album]
(CD 1) No Song Title Download ၀၁ ထားရစ်ခဲ့ – ချမ်းချမ်း Download ၀၂ ဘာကြောင့်များ – ဇမ်နူး Download ၀၃ တစ်ယောက်တည်းဆွေးတယ် – နေနေ Download ၀၄ မောင်သိရဲ့လား – ထွန်းအိန္ဒြာဗို Download ၀၅ မင်းဆုံးဖြတ် – ဆုန်သင်းပါရ် Download ၀၆ အမြဲတမ်းရှိနေမယ် – အိမ့်ချစ် Download ၀၇ အချစ်ကြောင့် – စိမ်းမို့မို့ Download ၀၈ ခံစားမှုများ – နီနီခင်ဇော် Download ၀၉ အမြဲတမ်း – မို့မို့ Download ၁၀ အပြစ်ဆိုမှာလား – နေနေ … Continue Reading →
June 23, 2013 MMA အိုင်းရင်းဇင်မာမြင့် အိမ့်ချစ် အဆိုတော် (မ) အခွေ (အများ) စိမ်းမို့မို့ ထွန်းအိန္ဒြာဗို နီနီခင်ဇော် ဆုန်သင်းပါရ် ဇမ်နူး နေနေ ချမ်းချမ်း မို့မို့ Myanmar Artist New Myanmar Albums Leaveacomment
01. ငယ်သူတို့သင်္ကြန် – ကေသီတိုး02. ခိုင်ရွှေဝါ – နီနီဝင်းရွှေ03. သင်္ကြန်ဇာတ်လမ်း – အေးချမ်းမေ04. ကြော်ငြာသင်္ကြန် – ထွန်းအိန္ဒြာဗို05. ရေပက်ရင်းချစ်တာရူးသလား – နောင်06. ရေစင် – ဟေမာနေဝင်း07. သိကြားမင်းနဲ့တိုင်ပြော – အဖွဲ့08. အသည်းယားတယ် – အဖွဲ့09. လူလည်ချာတိတ် – ဟေမာနေဝင်း10. သင်္ကြန်မလေး – ယဉ်မော်ဦး11. ရေကပွဲ – သီရိကိုကို12. သင်္ကြန်ပြီးရင်လှုပ်ရှားလိုက် – အေးချမ်းမေ13. အားလုံးရင်ထဲမှာ – မိုးကိုဦး14. နှစ်သစ်ဦးကိုကြို – သီရိကိုကို http://www.mediafire.com/?o5kfjvso2vmam9a Credit – Ko Tin Tun
March 24, 2013 Snuo Mwoani ထွန်းအိန္ဒြာဗို နီနီဝင်းရွှေ အေးချမ်းမေ ကေသီတိုး ဟေမာနေ၀င်း နောင် ယဉ်မော်ဦး မိုးကိုဦး သီရိကိုကို Leaveacomment
၁။ အိန်ဂျယ်တွေစောင့်ရှောက်တဲ့အချစ် – ချမ်းချမ်း (Mediafire) Minus : http://minus.com/lbqx3QNGT92F9y ၂။ ထပ်ချစ်မယ်ဆို – ဇော်ပိုင် (Mediafire) Minus : http://minus.com/lbfr9r9S3cpGic ၃။ စာပါတယ် – ရေဗက္ကာဝင်း (Mediafire) Minus : http://minus.com/lHreorOEVKTxJ ၄။ မနေ့ကလို – ထွန်းအိန္ဓြာဗို (Mediafire) Minus : http://minus.com/lbvwV3ugQj3KeY ၅။ အလည်လွန်အတွေးများ – ဥာဏ်လင်းအောင် (Mediafire) Minus : http://minus.com/lbljJUYkv2FDLL ၆။ အလွမ်းမှတ်တိုင် – ၀ိုင်းစုခိုင်သိန်း (Mediafire) Minus : http://minus.com/lblTQ5Ro5xaYet ၇။ ဟန်နီ – L ဆိုင်းဇီ (Mediafire) Minus … Continue Reading →
March 10, 2013 tartartuu အခွေ (အများ) ထွန်းအိန္ဒြာဗို ဖြူဖြူကျော်သိန်း ရေဗက္က၀င်း ဇော်ပိုင် ဥာဏ်လင်းအောင် ၀ိုင်းစုခိုင်သိန်း တင်ဇာမော် ချမ်းချမ်း Lဆိုင်းဇီ Lလွန်းဝါ Media Myanmar Artist New Myanmar Albums Rဇာနည်2Comments
City FM 9th Anniversary
မုန်းမုန်းမေ့ဖို့ခက်တယ် (စိုင်းစိုင်း၊မိုးမိုး) ချစ်ခြင်းရဲ့နေ့သစ်တိုင်း(ဇော်ပိုင်၊စိုးပြည့်သဇင်) သီးသန့်တွေ့ဆုံခန်း(ရဲလေး၊အေသင်ချိုဆွေ) ရင်ခုန်ရင်းပျံဝဲ(အာဇာနည်၊၀ိုင်းစုခိုင်သိန်း) ဘာမှမပြောင်းဘူး(Jenny၊ခေမီကို) အချစ်တစ္ဆေ(ရတနာမိုင်၊အောင်ရဲလင်း) ဝေးနိုင်မှာလား(မင်းမော်ကွန်း၊ရေဗက္ကာဝင်း) တီအားမို(ထွန်းအိန္ဒြာဗိုလ်၊ဒရာဗို၊ဖြူဖြူကျော်သိန်း) သြော်…မိန်းမ(ဖြိုးသီဟ၊သွှန်းရွှေသျှမ်း၊အယ်နီရှိုင်း) အို…ကမ္ဘာမြေ(စိုင်းစိုင်း၊ချမ်းချမ်း) Download Link Ifile It Mediafire
June 27, 2011 thant zin win အခွေ (အများ) စိုးပြည့်သဇင် စိုင်းစိုင်း ထွန်းအိန္ဒြာဗို ရဲလေး ရတနာမိုင် ဖြူဖြူကျော်သိန်း အောင်ရဲလင်း အေသင်ချိုဆွေ ရေဗက္က၀င်း ဇော်ပိုင် ၀ိုင်းစုခိုင်သိန်း ချမ်းချမ်း မိုးမိုး မင်းမော်ကွန်း Jenny New Myanmar Albums5Comments
အဆိုတော်အများ -^- အပိုင်းအစ (၁)
VIRUS3REMIX A အဝေးထွက်ပြေး မယ်သီတာခိုးတာဘယ်သူလဲ ခေါင်းမာခြင်း ရှားရှားပါးပါးမျက်ရည် သီချင်းငှက်ရဲ့ပျံသန်းမှု B မင်းလေးခွင့်လွှတ် ဘာတွေဖြစ်မလဲ နောက်ဆုံးအချစ် အလိုအပ်ဆုံး အမှတ်တရ သင်္ကြန်မိုး MeDiAfIrE A MeDiAfIrE B
May 16, 2011 လူသား အဆိုတော် (ကျား) အဆိုတော် (မ) အခွေ (အများ) ထွန်းအိန္ဒြာဗို ရင်ဂို ဆောင်းဦးလှိုင် ဇော်ဝင်းထွဋ် မျိုးကျော့မြိုင် သီရိဂျေမောင်မောင် Myanmar Artist5Comments
အချစ်စုံတွဲသီချင်းများ – MYMC
Valentine’s Day အတွက် အထူးအစီအစဉ်အနေနဲ့ အချစ်စုံတွဲသီချင်း အပုဒ် ၂၀ ကို စုပြီးတော့ Playlist တစ်ခု လုပ်ထားတာပါ။ ၁။ အလိုအပ်ဆုံးချစ်သူ – Alex + ထွန်းအိန္ဒြာဗို ၂။ အချစ်ကွန်ယက် – အောင်လ + လပြည့်ကဗျာ ၃။ ဘ၀ရဲ့သခင် – ဒွေး + ချောစုခင် ၄။ အရည်တွေပျော်ကုန်ပြီ – ဂရေဟမ် + ကဗျာဘွဲ့မှူး ၅။ ယနေ့မှစ နှစ်တစ်ရာတိုင် – ဂရေဟမ် + ရတနာဦး ၆။ မင်း – ထူးအယ်လ်လင်း + မီးမီးခဲ ၇။ တစ်စုံတစ်ရာ – ဂျေမောင်မောင် + သီရိဂျေမောင်မောင် ၈။ မင်းကိုသတိရရင် – ကောင်းကောင်း + မို့မို့လွင် … Continue Reading →
February 12, 2011 amedeo ဖြိုးကြီး အဲလက်စ် ထွန်းအိန္ဒြာဗို ရဲလေး ရတနာဦး ဆုန်သင်းပါရ် အေးချမ်းမေ အောင်လ ဒွေး ဂျေမောင်မောင် ဇော်ပိုင် ချောစုခင် မေစပယ်ညို လင်းနစ် မီးမီးခဲ Lဆိုင်းဇီ Lလွန်းဝါ Rဇာနည်3Comments
ဟန်းနီးမွန်းခရီး ၁။ လုံးဝမကြားချင်ဘူး – စည်သူလွင် ၂။ မချစ်ရင်မနေနိုင်တာကလွဲလို့ – ထွန်းအိန္ဒြာဗိုလ် ၃။ ဘဝကိုအရှုံးမပေးနဲ့ – ဘိုဘို ၄။ ဆိုးပေ – ရင်ဂို ၅။ မီးငယ် – ထွဏ်းထွဏ်း ၆။ ရွှေပေါက်တူး – ဟယ်ရီလင်း ၇။ သုခုမရဲ့သီးသန့်ပိုင်ရှင် – ချစ်စန်းမောင် ၈။ မီးအိမ်ရှင်မလေး – ညီပုလေး ၉။ ဟန်းနီးမွန်းခရီး – စည်သူလွင် ၁၀။ ပြင်သစ်အချစ် – ကဗျာဘွဲ့မှုး ၁၁။ မာယာ – ကိုစု ၁၂။ မိမိုးကို – အဲလက်စ် Download Mediafire
November 24, 2010 swordfish ဘိုဘို အဲလက်စ် စည်သူလွင် ထွန်းအိန္ဒြာဗို ထွဏ်းထွဏ်း ရင်ဂို ကဗျာဘွဲ့မှုး ချစ်စမ်းမောင် ညီပုလေး ဟယ်ရီလင်း2Comments
၀၁။ ဒစ္စကိုည (မျိုးကျော့မြိုင်+ဇော်ဝင်းထွဋ္ဋ်) ၀၂။ စဉ်းစားရဦးမယ် (မာမာအေး) ၀၃။ အချစ်တွေယူ ( မျိုးကျော့မြိုင် +နွဲ့ယဉ်ဝင်း) ၀၄။ နတ်မြင်းပျံ (ထွန်းအိန္ဒြာဗိုလလ်) ၀၅။ ကျနော်မကောင်းဘူး ( ဂျေမောင်မောင်) ၀၆။ အရည်ပျော်သွားတဲ့ည (ကော်နီ) ၀၇။ တစ်နာရီသီချင်း (ဇော်ဝင်းထွဋ္ဋ်) ၀၈။ ယုံကြည်ထားလိုက် ( ထွန်းအိန္ဒြာဗိုလ်) ၀၉။ အိပ်မက်လေး (သီရိဂျေမောင်မောင်+မျိုးကျော့မြိုင်) ၁၀။ အသည်းနုတော့ကြောက်တာပေါ့(နွဲ့ယဉ်ဝင်း) ၁၁။ လမ်းတွေ ( သီရိဂျေမောင်မောင်)
October 17, 2010 Yee Wai Aung နွဲ့ယဉ်ဝင်း အခွေ (အများ) ထွန်းအိန္ဒြာဗို ဂျေမောင်မောင် ဇော်ဝင်းထွဋ် ကော်နီ မာမာအေး မျိုးကျော့မြိုင် သီရိဂျေမောင်မောင် 8 Comments
ဇော်ဝင်းထွဋ် – Live at MCC
၁။ သတ္တုရဲ့မြစ်ဖျား ၂။ အသည်းကွဲအနမ်း ၃။ ဆေးပေါင်းခတဲ့ည (၁) ၄။ ဆူးလေး ၅။ ဘုရားကပေးတဲ့မိုးများ ၆။ အရည်တွေပျော်ကုန်ပြီ + ထွန်းအိန္ဒြာဗို ၇။ စီးဆင်းတဲ့သီချင်း ၈။ အမုန်းမြို့ရဲ့အဝေးမှာ ၉။ ဂျစ်ပစီမိုးတိမ် ၁၀။ ၀ဋ်ကြွေး ၁၁။ အစွန်းရောက် ၁၂။ တစ်ခါကလို ၁၃။ အက်ဆစ်အမုန်း ၁၄။ အချစ်များသူ့ဆီမှာ + ထွန်းအိန္ဒြာဗို ၁၅။ မီးတောက်အနမ်းများ ၁၆။ ကောင်းကင်ရဲ့အလင်း ၁၇။ ဒဏ်ရာရထား
September 9, 2010 htoo htoo ထွန်းအိန္ဒြာဗို ဇော်ဝင်းထွဋ်4Comments
ရင်ခုန်သံဖြည့်ဘက် ဇာတ်ကားထဲက ဇာတ်ဝင်သီချင်းပါ ဇာတ်ကားထဲကနေ ယူထားရလို့ အစပိုင်းမှာ စကားသံတွေပါနေတဲ့အတွက် ခွင့်လွှတ်ပေးပါရန်နှင့် တကယ်လို့ အဲ့ဒီသီချင်းကို mp3 သီးသန့် များရှိခဲ့ရင် ပြန်လည် မျှဝေပေးဖို့ တောင်းဆိုပါရစေ .. သီချင်းတစ်ပုဒ်အရည်အသွေးမပြည့်မီတဲ့အတွက်တော့ အားလုံးကို တောင်းပန်ပါရစေနော်..
September 3, 2010 htoo htoo ထွန်းအိန္ဒြာဗို ဇာတ်ဝင်သီချင်းများ ဟန်မင်းမေလာ 1 Comment
7 Golden Girls 2
1-အဆုံးမဲ့ ချစ်ခြင်း ~~~~ဖြူဖြူကျော်သိန်း 2-ခေါက်ထားလိုက် ~~~~စန္ဒီမြင့်လွင် 3-ထူးဆန်းလွန်းတဲ့အချစ်~~~~ချမ်းချမ်း 4-အမှားများ~~~~ထွန်းအိန္ဒြာဗိုလ် 5-အာဖျံကွီး~~~~စန္ဒီမြင့်လွင် 6-အသည်းခွဲဘုရင်မ~~~~ဖြူဖြူကျော်သိန်း 7-မေမေဆူလိမ့်မယ်~~~~နန်းစုရတီစိုး 8-မေ့တော့မမေ့သေးဘူး~~~~ချမ်းချမ်း 9-ကိုယ်တို့ဝေးနေ မိုင်းပေါင်းကုဋေ~~~~ထွန်းအိန္ဒြာဗိုလ် 10-ဆောရီးနော်ကိုကို~~~~နန်းစုရတီစိုး 11-ဖြူဖြူကျော်သိန်း(Interview) 12-အနီးဆုံးလား ၊ အဝေးဆုံးလား~~~~ဖြူဖြူကျော်သိန်း 13-အမုန့်နဲ့နောက်ကွယ်~~~~ချမ်းချမ်း 14-မင်းကြောင့်~~~~စန္ဒီမြင့်လွင် 15-ကိုယ်မညာတော့ဘူး~~~~Nကိုင်ရာ 16-တကယ်ဆိုရင်အချစ်ပဲလိုတယ်~~~~ချမ်းချမ်း 17-ဇာတ်ဆရာအလိုကျ~~~~ဖြူဖြူကျော်သိန်း
September 3, 2010 blackparade85 အဆိုတော် (မ) အခွေ (အများ) စန္ဒီမြင့်လွင် ထွန်းအိန္ဒြာဗို နန်းစုရတီစိုး ဖြူဖြူကျော်သိန်း အေသင်ချိုဆွေ ချမ်းချမ်း Myanmar Artist Nကိုင်ရာ New Myanmar Albums 11 Comments
7 Golden Girls 1
1-မိုးခါးရေ~~~~ဖြူဖြူကျော်သိန်း 2-သိမ်းထားခွင့်~~~~Nကိုင်ရာ 3-မိုးထဲမှာ~~~~စန္ဒီမြင့်လွင် 4-မိတော့မိတယ်~~~~အေသင်ချိုဆွေ 5-နေပါစေ~~~~ချမ်းချမ်း 6-အချစ်ဆိုသည်မှာ~~~~ထွန်းအိန္ဒြာဗိုလ် 7-အေသင်ချိုဆွေ(InterView) 8-စိတ်ကူးရွက်ကြွေ~~~~အေသင်ချိုဆွေ 9-အတွင်းကြေ~~~~ဖြူဖြူကျော်သိန်း 10-အဝေးဆုံးထွက်ပေါက်~~~~နန်းစုရတီစိုး 11-ပြန်လည်တမ်းတခြင်း~~~~နန်းစုရတီစိုး 12-တကယ်ချစ်ရင်~~~~Nကိုင်ရာ
September 3, 2010 blackparade85 အဆိုတော် (မ) အခွေ (အများ) စန္ဒီမြင့်လွင် ထွန်းအိန္ဒြာဗို နန်းစုရတီစိုး ဖြူဖြူကျော်သိန်း အေသင်ချိုဆွေ ချမ်းချမ်း Nကိုင်ရာ New Myanmar Albums 8 Comments